မိမိ Domain အား Blogspot ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း | Web Design Development, Domain, Hosting Servers Services
မိမိ ီသာငညေ အား ွူသြါစသအ ဖွငျ့ ခြိတျဆကျအသုံးပွုခွငျးဆိုရာတှငျ မိမိရဲ့ ဘူသြါစသအ.ခသာ က လိပျစာ နဲ့ မိမိ ဝယျယူထားတဲ့ ီသာငညေ ွောန ကို ခြိတျဆကျပွီး ပသကမိသာငညေညောန.ဘူသြါစသအ.ခသာ အစား ပသကမိသာငညေညောန.ခသာ ဆိုတဲ့ လိပျစာကို ပွောငျးလဲအသုံးပွုခွငျးပါပဲ။
ဒီနရောမှာ အပိုငျး ၄ ခုလောကျ ခှဲပွီးအဆငျ့လိုကျလုပျဆောငျပွသှားပါမယျ။
၁။ ွူသါနမ တှငျ ဃကအြသာ ီသာငညေ ထညျ့သှငျးခွငျး။
၂။ ီသာငညေ ပိုဆိုငျမူ စိစဈရနျ ှသုနည ရယူခွငျး (ဥတညနမြ့ငစ လနမငျငခအငေသည အသုနည)
၃။ ွှီ (ီသာငညေ ွောန ှပအြနာ) ပွောငျးလဲခွငျး။
၄။ ဥတညနမြ့ငစ အား ဠနမငျပ လုပျခွငျး
မိမိမှာ ဘူသြါစသအ ရှိတယျဆိုရငျ ပထမဦးစှာ ့အအစျါ။တတတ.ဘူသါနမ.ခသာ။ ထဲကို ဝငျလိုကျတာနဲ့ မိမိရဲ့ ဘူသြါစသအ ငြအန က ပျေါနပေါလိမျ့မယျ… ပုံမှာပွထားတဲ့ အတိုငျး ှနအအငညါ ွှ ြွငေခ ဆိုတဲ့အထဲကိုသှားပါ။
မိမိ ီသာငေည အား ြူသျါစသအ ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း
ဏကဘူငျ့ငညါ ရဲ့ အောက်နားမှာ ဗိ ဃကျအသာ ီသာငေည ဆိုတာကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဗိလညေခနိ ျနအအငညျါ ဆိုတဲ့အထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ ီသာငေည ညောန ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ှလေန ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
ဓျွှန ့လေန ညသအ ဘနနည ဘေူန အသ လနမင်ပ ပသကမ ကေအ့သမငအပ အသ အ့ငျ ိသာငေည. နမမသမ ၁၂. ဏူနျေန ်သူသတ အ့န ျနအအငညျါ ငညျအမကခအငသညျ.ဓ ဆိုတဲ့ နမမသမ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
၂။ ီသာငေည ပိုဆိုင်မူ စိစစ်ရန် ွှသုနည ရယူခြင်း (ဥတညနမျ့ငစ လနမင်ငခအေငသည အသုနည)
စောစောတုန်းက အဆင့် ၁ မှာ ပြခဲ့သလို ဃကျအသာ ီသာငေည ရယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ ှလေန ကြအအသည နိုပ်ရင် နမမသမ ဃသိန နဲ့အတူ ဃဗြနြ ၂ ခုထွက်လာသလို အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် ှနအအငညျါ ှုညျအမကခအငသညျ ဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုပ်ရင်လည်း အောက်ပါပုံမှာ ပြထားသလို ဃဗြနြ ၂ ခုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဏသငညအ လုပ်ရန် ဃဗြနြ နှစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
၁. တတတ ဆိုတဲ့ ဓညောန။ူဘေနူ။့သျအဓ ဆိုတဲ့ တစ်ခုနဲ့ ဓဗိမနျ။ီနျအငညအေငသည။ွှမေါနအဓ က ျါ့.ါသသါူန.ခသာ ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၂. နောက်တစ်ခုကတော့ လနမင်ငခအေငသည ခသိန ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးတူမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဥပမာ – ဓညောန။ူဘေနူ။့သျအဓ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ှင်္င်္နဗ၅၂ဗ၂၂ ဆိုပြီးဖြစ်နိုင်ပြီး ဓဗိမနျ။ီနျအငညအေငသည။ွှမေါနအဓ က ါလ-ျွံဗဗြဲဇှီ၃၃ီ၂ီ၂ြွှီီူ့၂.ဗြ.ိသာငေညလနမင်ပ.ါသသါူန့သျအနိ.ခသာ. ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဃဗြနြ နှစ်ခုစလုံးကို မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အကယ်၍ ျ့နမ တွေက မိမိရဲ့ ိသာငေည ကို တတတ မရိုက်ထည့်ပဲ ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နမမသမ တွေကျလာတတ်ပါတယ်.. အဲ့အတွက် ဓဗ ျွနခသမျိဓ ၄ ခုလည်း မှတ်သားထားရန်လိုပါတယ်။
၃။ ြှီ (ီသာငေည ြောန ှပျအနာ) ပြောင်းလဲခြင်း။
ဃဗြနြ နဲ့ ဗ ျွနခသမိ ကို ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း ထည့်သွင်းရန်သာဖြစ်ပါတယ်။
Inform for your Domain Renewal for 2018-2019 Financial Year
affiliate cms colocation cpanel datacenter domain free gmail gsuite hacking job Joomla mail malware mysql news private server promotion relay Security server ssl tutorial tutorials vps Wordpress wwm